စက်ဘီးများ - mert-z htr mountain 26 bike Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
စက်ဘီးများ classified: အသုံးပြုပြီး MERT-Z HTR MOUNTAIN 26 Bike
Zaw Htut Aung
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ CONTAINER ဘီးသန့်လေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ရောင်းထွက်သွားတဲ့ ဘီးလေးတွေလဲ ရှိပါတယ်ဗျ π ဝယ်ယူသွားတဲ့ bro တို့ကိုလည်း ကျေးဇူးအများတင်ပါတယ် ခင်ဗျ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ဘီးလေးတွေကိုလည်း ဆက်လက်အားပေးကြပါဦးဗျို့ MERT-Z HTR MOUNTAIN 26 Bike Shimano speed 3*8 center suspension Aluminium frame & fork suspension paint 99% good Ks -150000 Ph Number 09266253240 , 095075972
ဖာဘိန်း bt 4လုံး 48V အားခံတယ်
ဖာဘိန်း Bt. 4လုံး 48Volt. Bt အာ